မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ တံဆိပ်
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အလံတော်
ဗိုလ်ချုပ် ဇင်မင်းထက်၊ ရဲချုပ်
ရဲဗိုလ်ချုပ် အောင်နိုင်သူ၊ ဒုတိယရဲချုပ်
ရဲဗိုလ်ချုပ် မျိုးဆွေဝင်း၊ ဒုတိယရဲချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အမည်ဖြင့် လွတ်လပ်သော အဖွဲ့တစ်ခုအနေဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တပ်မတော်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၃.၃ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများ
၃.၅ နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့များ
ဗြိတိသျှတို့သည် ၁၈၈၇ အောက်တိုဘာလ ၂၈ တွင် ကျေးရွာအက်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ကျေးရွာပုလိပ်အဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၈၈၉ တွင် ရန်ကုန်ပုလိပ်အက်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီး ရန်ကုန်ပုလိပ်အဖွဲ့ (Rangoon City Police)ကိုခွဲထုတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ပုလိပ်အဖွဲ့ ၊ မြို့ပြပုလိပ်အဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ပုလိပ်အဖွဲ့၊တို့ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၁၉၃၇ တွင် Home rule(ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး)ကာလတွင် ပုလိပ်အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပုလိပ်မင်းကြီးတစ်ဦးမှအုပ်ချုပ်သော သာမန်ပုလိပ်နှင့် စစ်ဘက်အရာရှိကြီးတစ်ဦးမှ အုပ်ချုပ်သော စစ်ပုလိပ်ဆိုပြီး ၂မျိုး ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင်ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့များအား ပြည်ထောင်စုစစ်ရဲတပ်(Union Military Police - UMP) အဖြစ်ပေါင်းစည်းဖွဲ့ခဲ့သည်။ တပ်ရင်းပေါင်း ၂၁ရင်းရှိပြီး နယ်ခြားစောင့်နှင့် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးတပ် ဟု ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၅၄တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့(အင်တာပိုလ်)သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ဧပြီလ ၁၇က်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစစ်ရဲကို ပြည်စောင့်ရဲ (Union Constabulary)ဟု ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ အောက်တိုဘာ ၁ တွင် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့(People's Police Force) အမည်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၁၉၉၅ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှ အမိန့်အမှတ် ၁/၉၅ ကိုထုတ်ပြန်ကာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ (Myanmar Police Force) ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာလ ၁ရက်နေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရာထူးအဆင့်များနှင့် အဆောင်အယောင်တံဆိပ်များ
အောက်ပါတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရာထူးအလိုက် အဆင့်များဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးရာထူးမှာ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး (Police General)ဖြစ်သည်။
! မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့
ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒုတိယ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဗိုလ်ချုပ် ရဲမှူးချုပ် ရဲမှူးကြီး ဒုရဲမှူးကြီး ရဲမှူး ဒုရဲမှူး ရဲအုပ် ဒုရဲအုပ် ရဲအရာရှိလောင်း
Commissioner General Deputy Commissioner General Commissioner Deputy Commissioner Senior
Superintendent Senior Inspector Inspector Sub-inspector Officer Cadet
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဒုရဲတပ်ကြပ်၊ ရဲတပ်ကြပ် နှင့် ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ရာထူးတို့မှာ စစ်တပ်၏ ဒုတပ်ကြပ်၊တပ်ကြပ် နှင့် တပ်ကြပ်ကြီး တို့တွင် သုံးသော အနီရောင် ဘောင်ခတ်ထားသည့် အနက်‌ရောင် အရစ်များ ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင် ရဲများက အဖြူရောင်ဘောင်ခတ်ထားသည့် အပြာရောင် အရစ် များကို အသုံးပြုကြသည်။
ရဲအရာခံဗိုလ် -ဒုတိယတန်း ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ရဲတပ်ကြပ် ဒုရဲတပ်ကြပ် ရဲတပ်သား
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် တွင် ရဲချုပ်(ဒုတိယရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး)၊ ဒုတိယရဲချုပ်(ရဲဗိုလ်ချုပ်၁နှင့်၂)၊ ရဲရာထူးခန့်ချုပ်(ရဲမှူးချုပ်)၊ ဦး/ရေး/ထောက် ဆိုင်ရာရဲမှူးချုပ်အဆင့်များက တာဝန်ယူကြီးကြပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်သည်။ ဦးစီးဌာနတွင် ရဲမှူးချုပ် တစ်ဦးမှ ဦးစီး၍ နိုင်ငံအတွင်းလုံခြုံရေး၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ မှုခင်းများ၊ သင်တန်းများ၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ကြီးကြပ်ကန့်သတ်ပစ္စည်း များ ထုတ်ပေးအပ်နှံခြင်း၊ စစ်ဆေးရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သည်။ ရဲရာထူးခန့်ချုပ်သည် ရဲအရာရှိများ၏ ရာထူးတိုးခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းများဆောင်ရွက်သည်။ ရေးဌာနတွင် ရဲမှူးချုပ်တစ်ဦးမှကွပ်ကဲပြီး အခြားအဆင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ရာထူးခန့်ထားရေး၊ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားရေး၊ ရဲစည်းကမ်း၊ လစာစရိတ်၊ သက်သာချောင် ချိမှုနှင့် အငြိမ်းစားခံစားခွင့်များ ဆောင်ရွက်သည်။ ထောက်ဌာနတွင် ရဲမှူးချုပ် တစ်ဦးမှကွပ်ကဲပြီး ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ပြင်ဆင်ရေး၊ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးများဆောင်ရွက်သည်။ ဓာတုဗေဒစစ်ဆေးရေးဌာနကို ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်မှ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ၍ အစွန်းအထင်း/ အဆိပ်အတောက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အထွေထွေ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် မှာ ဗိုလ်ချုပ် ဇင်မင်းထက်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယရဲချုပ်များမှာ ရဲဗိုလ်ချုပ် အောင်နိုင်သူနှင့် ရဲဗိုလ်ချုပ် အောင်အောင်တို့ ဖြစ်သည်။ လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့နှင့် အကြီးအကဲများမှာ- ရဲဦးစီးအရာရှိချုပ် ရဲမှူးချုပ် ဇော်ထွန်းအောင်၊ ရဲရေးချုပ် ရဲမှူးချုပ် ဝင်းထွန်း၊ ရဲထောက်ချုပ် ရဲမှူးချုပ် သန်းတင်အောင်၊ ရဲတပ်ရင်းများကွပ်ကဲရေးမှူး ရဲမှူးချုပ်များ၊ သတင်းတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် မြဝင်း၊ စည်ပင်သာယာရေးတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ်ဝင်းကြည်၊ မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ်ဝင်းနိုင်၊ ရဲဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲမှူးချုပ် သိန်းတင့် ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးအောင်ကိုဦးဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး များမှာ - ရဲမှူးချုပ်မျိုးမင်းထိုက်(ရန်ကုန်)၊ ရဲမှူးကြီးအောင်ထွဋ်(မန္တလေး)၊ ရဲမှူးကြီးဘကြည်(မကွေး)၊ ရဲမှူးကြီးသိန်းကြည်(ပဲခူး)၊ ရဲမှူးကြီးမျိုးဆွေဝင်း(ပဲခူး အနောက်)၊ ရဲမှူးကြီးညွန့်ဝင်း(တနင်္သာရီ)၊ ရဲမှူးကြီးမောင်မောင်လွင်(ကချင်)၊ ရဲမှူးကြီး မောင်မောင်(ကယား)၊ ရဲမှူးကြီး အောင်မြတ်မိုး(ကရင်)၊ ရဲမှူးကြီးမြင့်တိုး(ချင်း)၊ ရဲမှူးကြီးတင်မောင်(မွန်)၊ ရဲမှူးကြီး ကြည်လင်း(ရခိုင်)၊ ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်(ရှမ်း တောင်ပိုင်း)၊ ရဲမှူးကြီးစန်းလွင်(ရှမ်း မြောက်ပိုင်း)၊ ရဲမှူးကြီးဝင်းကြည်(ရှမ်း အရှေ့ပိုင်း)ုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲများ [ Updated @ 04/09/2020]
1) ရဲ ၁၈၀၃ ဒုတိယ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ဝင်းဦး - ရဲချုပ်
2 )ရဲ ၁၆၀၇ ရဲဗိုလ်ချုပ် အောင်အောင် -ဒုတိယ ရဲချုပ် (၁)
3) ရဲ ၁၉၃၆ ရဲဗိုလ်ချုပ် အောင်နိုင်သူ - ဒုတိယ ရဲချုပ် (၂)
4) ရဲမှူးချုပ် ဇော်ထွန်းအောင် -ရဲဦးစီးအရာရှိချုပ်
5) ရဲမှူးချုပ် ဝင်းထွန်း - ရဲရေးချုပ်
6) ရဲမှူးချုပ် မြင့်တိုး -ရဲထောက်ချုပ်
7) ရဲမှူးချုပ် - ရဲရာထူးခန့်ချုပ်
8)ရဲမှူးချုပ် ခင်မောင်အေး -ရဲလေ့ကျင့်ရေးအရာရှိချုပ်
9) ရဲမှူးချုပ် အောင်ဌေးမြင့် - နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကြီးမှူး
10)ရဲမှူးချုပ် စိုးနိုင်ဦး - မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
11) ရဲမှူးချုပ် မြဝင်း - သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
12) ရဲမှူးချုပ် မြင့်ထူး - လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့မှူး
13)ရဲမှူးချုပ် နေမိုးသက် - ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
14) ရဲမှူးချုပ် သက်ဝေ - လေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
15)) ရဲမှူးချုပ် လူလူသန်း- ရထားရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
16) ရဲမှူးချုပ် ဝင်းနိုင် မှူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
17) ရဲမှူးချုပ် တင်အောင်ဝင်း -ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
18) ရဲမှူးချုပ် ကြည်လင်း - အမှတ်(၁) လုံခြုရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲကွပ်ကဲမှုအဖွ့မှူး
19) ရဲမှူးချုပ် ဝင်းမင်းသိန်း - အမှတ်(၂)လုံခြုရေးရဲကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့မှူး
20) ရဲမှူးချုပ် ဝင်းဗိုလ်- အမှတ်(၃) လုံခြုံရေးရဲကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့မှူး
21)ရဲမှူးချုပ် မြဝင်း- အမှတ်(၄)လုခြုံရေးရဲကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့မှူး
22) ရဲမှူးချုပ် ထက်လွင် - အမှတ်(၁)နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
23 ရဲမှူးချုပ် မျိုးမင်းအောင် အမှတ်(၂) နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
24) ရဲမှူးချုပ် ဟန်ထွန်း - ကျောင်းအုပ်ကြီး/ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း (ဇီးပင်ကြီး)
25) ရဲမှူးကြီး ရဲမြင့် - ရဲအရာရှိအတတ်သင်ကျောင်း(မန္တလေး)
26)ရဲမှူးချုပ် မျိုးမင်းထိုက်- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
27) ရဲမှူးချုပ် တင်ကိုကို - ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
28) ရဲမှူးကြီး ကိုကိုလွင်- နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
29) ရဲမှူးကြီး ဉာဏ်မြင့်ကျော်- ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
30) ရဲမှူးကြီး မျိုးဆွေ- ကယားပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
31) ရဲမှူးကြီး သန်းဝင်း - ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
32) ရဲမှူးကြီး ကျော်ထွေး - ချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
33) ရဲမှူးကြီး ဝင်းကြည် -စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
34) ရဲမှူးကြီး ခင်ကျော်- တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
35) ရဲမှူးကြီး ကျော်ထွဋ်
36) ရဲမှူးကြီး ကျော်ထွန်း- မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
37) ရဲမှူးချုပ် စိန်လွင် -မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
38) ရဲမှူးကြီး သက်နိုင် - မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
39) ရဲမှူးကြီး ခင်ဇော် - ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
40) ရဲမှူးကြီး တင်ဇော်ထွန်း-ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
41) ရဲမှူးကြီး စိုးမြင့်ဦး - ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
42) ရဲမှူးကြီး ဉာဏ်မြင့်ကျော် -အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
43)ရဲမှူးကြီး စိုးလင်းအောင် - အမှတ်(၁)သစ်တောလုံခြုရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
44)ရဲမှူးကြီး မြင့်လွင် -အမှတ်(၂)သစ်တောလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
45) ရဲမှူးကြီး သူရ သွင်ကိုကို - ရေနံမြေလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
46)ရဲမှူးကြီး နေထွန်း - ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး
47) ရဲမှူးကြီး သက်လွင် -စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့မှူး(နေပြည်တော်)
48)ရဲမှူးကြီး ဥက္ကာဗိုလ်- စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့မှူး(ရန်ကုန်)
49)ရဲမှူးကြီး - စည်ပင်သာယာရဲတပ်ဖွဲ့မှူး(မန္တလေး)
*50) ရဲမှူးကြီး ဒေါ်အေးအေးကျော် - ဌာနမွူး/နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းများတားဆီးနှိမ်နင်းရေးဌာန
51)ဒေါက်တာ ကြည်မင်းဦး - ညွှန်ကြားရေးမှူး ,ဓာတုဗေဒစစ်ဆေးရေးဌာန,မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၁၅ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေ အပိုင်းအခြားမှာ နယ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းဖြစ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့် တွဲဖက်တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များမှာ အဆင့်အတန်း တူညီမှုရှိကာ ၎င်းတို့တွင် အောက်ပါအတိုင်း တပ်ဖွဲ့ရုံးများနှင့် ရဲစခန်းများပါဝင်သည်။
နယ်မြေဒေသလူဦးရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့အပေါ် မူတည်လျက် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ များကို နှစ်ပိုင်းခွဲခြား သတ်မှတ်ထားသည်။ ကအဆင့်နှင့် ခအဆင့် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့များဟု သတ်မှတ်၍ ဒုတိယရဲမှူးကြီးအဆင့်ရှိ အရာရှိကြီးများမှ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည်။ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးများမှာ ရဲမှူးအဆင့်ဖြစ်ပြီး ရဲစခန်းမှူးများကိုမူ ဒုရဲမှူးအဆင့် သတ်မှတ်ထားရှိသည်။
လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲပေါင်း ၃၁ ခုရှိသည်။ ထို့အပြင်အခြားလက်အောက်ခံအဖွဲ့များမှာ-
နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့များ
အမှတ် (၁) နယ်စပ် နယ်ခြားစောင့် ရဲ ကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့မှူး ရုံး
အမှတ် (၁) နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲ
အမှတ် (၂) နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲ
အမှတ် (၃) နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲ
အမှတ် (၄) နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲ
အမှတ် (၅) နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲ
အမှတ် (၆) နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲ
အမှတ် (၇) နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲ
အမှတ် (၈) နယ်ခြားစောင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲ
အမှတ် ၁ ရဲလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း (ရမည်းသင်း)
အမှတ် ၂ ရဲလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း (ပြည်-ဝက်ထီးကန်)
အမှတ် ၃ ရဲလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း (စစ်ကိုင်း)
အမှတ် ၄ ရဲလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း (တောင်လေးလုံး)
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
↑ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့။5November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၀၁၄-၁၁-၁၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၆ ၃.၇ ၃.၈ ကြေးမုံ အထူး ကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ပြည်သူ့ အတွက် စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာ၊ အချပ်ပို (က)၊ The Mirror Daily, 25.4.2020
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ Archived6October 2012 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံ_ရဲတပ်ဖွဲ့&oldid=742464" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၅:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။